अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड भित्र्याउने उम्दा पाँच वैज्ञानिक
देशले नचिने पनि विदेशले पत्याएका पाँच वैज्ञानिक महिला झण्डै तीन करोडको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड भित्र्याएर स्वदेशमै अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
खानेपानी शुद्धीकरणमा जुटेकी वैज्ञानिक टिष्टा
चीनमा पाएको अवसरलाई त्यागेर स्वदेश फर्किएकी वैज्ञानिक टिष्टा प्रसाईं जोशी ओडब्लुएसडी अवार्ड पाएपछि काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी शुद्धीकरण गर्ने अनुसन्धानमा जुटेकी छन्।
आयुर्वेदिक जडीबुटीको अनुसन्धानमा वैज्ञानिक ज्योती
पछिल्लो ओडब्लुएसडी अवार्ड पाएकी युवा वैज्ञानिक ज्योती भण्डारी आयुर्वेदिक जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकी छन्।
खेर गएका फलबाट औषधि बनाउँदै प्रतिभा ओडब्लुएसडी अवार्ड पाएपछि वैज्ञानिक प्रतिभा पाण्डेले शुरू गरेको खेर गएका अम्लीय फलबाट औषधि बनाउने अनुसन्धान पूरा भएर प्रविधि हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको छ।
खडेरी अनुमान गर्ने हेमुको आविष्कार ओडब्लुएसडी अवार्ड पाएर अनुसन्धानमा जुटेकी हेमु काफ्लेले नयाँ प्रविधिको विकास समेत गरेकी छिन्, जसले खडेरीको अनुमान गर्न सहयोग गर्नेछ।
वैज्ञानिक शोभाले कृषिमा देखाएका सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएपछि वैज्ञानिक शोभा पौडेलले गरेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनले असर नपार्ने गरी कसरी खेती गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिनेछ।
दफा ४७ को खतरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान जस्ताको तस्तै छाडिंदा व्यक्तिगत प्रतिशोध र रिसइबी साध्न साइबर कानूनको दुरुपयोग जारी छ।
के हो पेगासस ? कसरी हुन्छ ह्याकिङ ? पेगासस स्पाइवेयर वा ह्याकिङ सफ्टवेयर प्रयोग गरी भारतसहित ११ देशका पत्रकार, अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, व्यापारी लगायतको फोन ट्यापिङ भएको खबर अहिले चर्चामा छ।
के 'आरएनए' नै हाम्रो जीवन कथाको नायक हो त? वैज्ञानिकहरू भन्छन्- जीवन शुरू भएपछि पृथ्वीका हरेक ठाउँहरू कसरी भरिन गए र विविधता कसरी सम्भव भयो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। तर, अजैविक पदार्थबाट यो धर्तीमा जीवन कसरी उत्पन्न भयो? यो ज्वलन्त प्रश्न हामी सामु छ, जसको उत्तर अझै अज्ञात छ।
क्लबहाउस : के हो? के होइन? क्लबहाउस चौबीसै घन्टा जागा रहन्छ। विभिन्न देशका प्रयोगकर्ता एकै ठाउँ भेला हुने भएकाले यहाँ जुनसुकै समयमा कुनै न कुनै रुममा प्रवेश गर्न सकिन्छ।
सुनाखरी संरक्षणको पहल संसारमा सबैभन्दा धेरै विविधता र बढी व्यापार हुने वनस्पति सुनाखरी संरक्षणका लागि ग्रीनहुड नेपालले पहल थालेको छ ।
क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीमा अन्तरआबद्धता हुने नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच एकबाट अर्कोमा कारोबार (अन्तरआबद्धता) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र ब्यांकले ‘नेपाल क्यूआर स्ट्यान्डराइजेसन फ्रेमवर्क एन्ड गाइडलाइन्स’ तयार पारेर एउटा ब्यांक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट अर्कोमा कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हाे।
क्यूआर कोडबाटै तरकारीदेखि सरकारी सेवाको भुक्तानी छाेटाे समयमै फड्को मारेको प्रविधि हो, क्यूआर कोड। उपभोग्य सामान खरिद गर्दा होस् कि सरकारी सेवाको भुक्तानी गर्दा होस् क्यूआर काेडले दैनिकी सहज बनाएकाे छ, तर अन्तरआबद्धता नहुँदा भने कठिनाइ भइरहेको छ।
के हो बग हन्टिङ ? बग खोजेरै लाखौं कमाउँदै छन् नेपाली युवा युवा पुस्तामाझ सामाजिक सञ्जाल र विश्वका ठूल्ठूला संस्थाका वेबसाइटमा रहेका सुरक्षा जोखिम पत्ता लगाएर इनाम जित्ने होडबाजी नै चलेको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश फेसबूकको बग खोज्न तल्लीन छन्। बग हन्टर बन्नु युवाहरूमाझ रोमाञ्चक विषय बनेको छ। कतिपयले यसबाट राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन्।
विज्ञान र प्रविधि कमल मादेन
नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट : गुणस्तरीय सेवा, ग्राहकप्रति उदासीन
नेपाल टेलिकमले एफटीटीएच प्रविधिबाट सस्तोमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा दिइरहेको छ। तर, प्रचारको कमी, नयाँ जडानमा उदासीनता जस्ता कारण ६ प्रतिशत सेवाग्राहीले मात्र टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्।
मोबाइलबाटै आर्थिक कारोबारको सेवा दिँदै टेलिकम, डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी स्थापना
नेपाल टेलिकमले मोबाइलबाटै आर्थिक कारोबारको सेवा दिने भएको छ। टेलिकमले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरबाटै अर्को मोबाइल नम्बरमा कारोबार गर्न सक्ने गरी सेवा दिने भएको छ।
टेलिकमलाई ‘फाइभजी’को परीक्षण गर्न निर्देशन, ‘फोरजी’मा थपिए तीनवटा सेवा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई चालू आर्थिक वर्षभित्रै तीब्र गतिको मोबाइल इन्टरनेट ‘फाइभजी’को परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छन्।
ट्राफिक जरिवाना इसेवाबाट पनि तिर्न सकिने ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेवापत तिर्नुपर्ने जरिवाना अबदेखि इसेवाबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक महाशाखा तथा मातहतका अन्य कार्यालयले ट्राफिक जरिवाना रकम इसेवाबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।
इन्टरनेटमा कसरी गोपनीयता कायम गर्ने ? स्मार्टफोन, स्क्रिनसट, इन्टरनेट अफ थिंग्स् (आईओटी) डिभाइसजस्ता इन्टरनेटमा जोडिएका उपकरण प्रयाेग गर्छाैँ। घडी, स्पिकर, बत्तीलगायत अधिकांश एप्लिकेसनले हाम्रा गतिविधि ट्रयाक गरेर सारा विवरण विज्ञापनदाता लगायतलाई बिक्री गर्छन्। यस्तोमा हाम्रो गोपनीयता भ्रमसरह बनेको छ।
टेलिकमको सिमकार्ड आफ्नो नाममा ल्याउन ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नेपाल टेलिकमका ग्राहकले आफ्नो नाममा नरहेको सिमकार्ड आफ्नो नाममा ल्याउन प्रिपेड सिमकार्ड ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ।
एनसेलको सिम फोरजीमा अपग्रेड गर्दा दुई जीबी डेटा बोनस पाइने एनसेलको सिमकार्डका ग्राहकले आफूसँग भएको थ्रीजी सिमलाई फोरजीमा अपग्रेड गर्दा बोनस सुविधा पाउने भएका छन्। एनसेलले ‘फास्ट फरवार्ड लाइफ’अभियान अन्तर्गतको ल्याएको यो अफरमा सिमकार्डलाई फोरजीमा अपग्रेड गर्दा दुई जीबी डेटा बोनस पाइने जानकारी दिएको छ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ता साढे २३ लाखले बढे, बन्दाबन्दीले ब्रोडब्याण्डतर्फ आकर्षण नेपालमा द्रूत गतिको इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता बढेका छन्। गएकाे चैतदेखि कात्तिकसम्मकाे सात महीनामा मोबाइल इन्टरनेट, ब्रोडब्याण्ड लगायतका ग्राहक २३ लाखभन्दा धेरै बढेका छन्।
टेलिफोन प्रयोगकर्ता मासिक सवा चार लाखले बढे, दुर्गमका केही गाउँमा सेवा पुग्नै बाँकी नेपाललमा टेलिफोन प्रयोगकर्ता मासिक सवा चार लाखले बढेका छन्। तर, कतिपय दुर्गम गाउँमा भने अझै टेलिफोन सेवा पुग्न सकेको छैन।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर इसेवाबाटै, घन्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति देशैभरका आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर इसेवाबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। करदाताहरूले आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरूको राजश्व इसेवाबाट भुक्तानी व्यवस्था तय भएको छ।